Basikety – «Fiba 33 Africa cup 2017» : ao amin’ny sokajy “B” i Madagasikara | NewsMada
Basikety – «Fiba 33 Africa cup 2017» : ao amin’ny sokajy “B” i Madagasikara
Hiaraka ao amin’ny vondrona “B” i Madagasikara sy i Niger ary i Nizeria, eo amin’ny fiadiana ny ho tompondakan ‘i Afrika, taranja basikety lalaovina olon-telo miaraka na “Fiba 33 Africa cup 2017”. Fihaonana, tanterahina any Lomé, Togo, ny 3 – 5 novambra ho avy izao.
Miaraka amin’i Nizeria sy i Niger ny Malagasy amin’izany sokajy izany. Araka ny fandaharam-potoana, hidona amin’i Madagasikara voalohany ry zareo Nizerianina, ka aorian’io vao hikatroka amin’i Nizer. Lalao hotontosaina ny zoma 3 novambra avokoa ireo. Hiatrika ny ampahefa-dalana ireo roa voalohany isan-tsokajy.
Raha ny antontanisa, ambony amin’ny filaharana iraisam-pirenena ry zareo Niger, raha mitaha amin’i Nizeria. Mahafehy tsara ity basikety ho an’olon-telo ity ry zareo raha mitaha amin’i Nizeria. Raha ny fahitana azy, azon’ny Malagasy resena tsara i Nizeria ary malalaka ny lalana hiatrehana ny ampahefa-dalana.
Hisolo tena an’i Afrika, any amin’ny fiadiana ny ho tompondaka eran-tany 2018, ireo ekipa roa miatrika ny famaranana. Marihina fa ry zareo Egyptianina no laharana voalohany aty Afrika, amin’izao fotoana izao.